Sabboonummaa balleessuuf falli duraa hiikaa ‘saba’ jedhu jallisuu dha jetti Bilxiginnaan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSabboonummaa balleessuuf falli duraa hiikaa ‘saba’ jedhu jallisuu dha jetti Bilxiginnaan.
Kana irraa ka’uunis ‘sabummaa’ amma hiikaan isaa beekamu (ብሄር)’ irratti lola bananii jiru. Barruun kun dokmantii leenjii kaadiree isaanii keessaa fuudhame. Akka leenjii kennamaa jiru kanaatti ‘sabummaa’n firooma dhiigaa caalaa hariiroo qorqalbii fi hawaasummaa irratti hundaawa. Kana jechuun fakkeenyaaf ‘firooma dhiigaa Oromummaa caalaa firooma qorqalbii saba biraa waliin qabaatamutu murteessa akka jechuu ti. Firoomni sabummaa kun kan murtaahu warri walitti saba tahu mootummaa ummataa (ሃገረ መንግስት) eega seeraan uummatanii booda jedha. Kana jechuun caasaan bulchiinsa biyyaa kan heera amma jiru irratti hundaawee diriire jijjiiramuu qaba jechuu dha. Sabummaa haaraatti ijaaramu keessatti ammoo akka amma Oromoo, Amaara, Tigree… jedhamee waamamu kun ‘saba’ jedhamuun ni hafa. Jarri kun gosa jedhamuuf deemu.
Sabummaan sadarkaa kanaa olitti ol guddaa waan taheef ‘saba’ jechuun kan amma beekamu kun badee walitti cafaqamee hiikaa ‘sabaa’ isa haaraa ijaara jechuu dha. Kan amma ‘saba’ jedhamee waamamu kun ‘gosa (ዘውግ)’ malee saba miti jedheera barsiifni Bilxiginnaa. (Osoma jennuu jecha ዘውግ jedhu namni yeroo duraaf hiikaa siyaasaa keessatti bal’inaan fayyadamuu jalqabe Biraanuu Naggaa tahuu hin dagatinaa). Gosoonni akka Oromoo, Amaara, Tigree jennee waamnu kun gosa malee saba miti, gosoonni ammoo ka’umsa siyaasaa tahuu hin danda’anu jedha. Akka hiikaa kanaatti Oromummaan gosummaa dha malee sabummaa miti waan taheef maqaa siyaasaa ittiin ijaaraman tahuu hin danda’u jechuu dha. ‘Sabummaan’ Bilxiginnaan ijaaruu barbaaddu firooma dhiigaa yookiin sanyiin kan ibsamu osoo hin taane hariiroo qorqalbii fi laalcha siyaasaatiin qofa murtaaha. Maalummaa Bilxiginnaa irratti kan dubbataa baane bubbuleetuma as bahaa jira.
Dur Hailesilaaseetu “Afaan Jimmaa, Afaan Wallagaa, Afaan Karrayyuu, Afaan Arsii, ….” jechaa ture Afaan Oromoo yoo jedhe Oromo tokkoomsuu waan ta’ef ni lagatu ture.
Kun dhama’an fi raatuun bilxiginnaa bara kana keessaa immoo olii gadi deemee, “nu biratti Jimmatti iskoortii jedhuu, Afaan Jawar fa’a biratti aka biraa jedhuu, …………… galamanee galamanee.… afaan Gujii, afaaan Baalee, Afaan maaloo afaan maaloo… yoon wallagga deeme akkanana na godhu… zibaazinkee
jechaa Oromoo gargar qoodee bittinneessuu barbaadaa. Duulaa hamaa karaa adda addaatiin tokkummaa Oromoo irrat banamee jiru kana ija gamnummaatin ilaaluu qabna yaa Oromoo.
OMN: Qophii Addaa Komii Jiraattota Aanaa Noolee Kaabbaa (Gurraandhala 06, 2020)